သင်​ကိုယ်​တိုင်​​တောင်​မသိလိုက်​ဘဲ သင့်​ကိုလိမ်​သွားနိုင်​တဲ့နည်းလမ်း​တွေ – Blue Sea
၃ နှင်းဆီပန်းကို အညှာဖြုတ်​ ။ အပ်​နဲ့. အပ်​ချည်​ကိုပြဒါးစိမ်​ ။ တွဲလျှက်​သား အပ်​ချည်​ပါ အပ်​ကို ပန်းဖင်​မှာထိုးထား ။ ပန်းထိပ်​ကို ပြဒါးသုတ်​ ။ အ​ပေါ်က. ​ကြေးလင်​ပန်း ထား တီးကြည့်​ ။ ထိုပန်း ထကမည်​ ။
၄နို့ဆီဗူးက်ို အ​ပေါက်​မ​ဖောက်​ဖဲ ကုန်​တာဟာ နတ်​ဘုရားတန်​ခိုး ​ကြောင့်​မဟုတ်​ပါ ။ ပြဒါး​ကြောင့်​ပါ ။သံနဲ့. ပြဒါး ဓာတ်​ပြုမြဲမို့. သုတ်​လိမ်းထားပြီး များမကြာမှိ ပူလာပြီး အ​ငွေ့အဖြစ်​​ပြောင်းလဲသွာသဖြင့်​နို့ဆီများ ​ပျောက်​သွားတတ်​ပါသည်​ ။
၅။ပုလင်း​တွေ ဖန်​ခွက်​​တွေ ဝါးတဲ့နည်းပါ ။ ဒါက​တော့ ဟင်းနုနွယ်​
ဆူး​ပေါက်​ရိုးနီပင်​ပဉ္စငါးပါးနဲ့. မျက်​လှည့်​ပြမည့်​ ဖန်​ပုလင်း​တွေကို7
weeks ပြုတ်​ ။ ဝါးမဲ့သူကလဲ အစာမခံထားဘဲ 7weksတိုင်​ ၄င်း ဟင်းနုနွယ်​သတ္ထုပြုတ်​ရည်​​သောက်​။ စား ပြီးမှ ဝါးရပါတယ်​။
ပြုတ်​သားဝ​နေမှသာ ပါးစပ်​ထဲ​ရောက်​သည်​နှင့်​ အရည်​​ပျော်​သွားစမြဲပါ ။ လျှာ/အာ ထိခိုက်​ပွန်းပဲ့ နာကျင်​ခြင်းမရှိတာ ဒီနည်း ဖြစ်​ပါတယ်​ ။
၆။မသိုးထမင်း မသိုးထမင်း ကြားဖူးမ​ပေါ့ ။ ​ထွေ​ထွေထူးထူး​တော့ မထူးပါဘူး ။ အထားခံနိုင်​​အောင်​ ချက်​ထားတာပါ ။နတ်​သုဒ္ဒါနဲ့. နှိုင်းရတဲ့ထိ ၃ရက်​တာ မသိုး​အောင်​ စီမံထားနည်း​လေးပါ ။ ထမင်းကို ​တောင့်​​တောင့်​​လေးရ​အောင်​ငှဲ့ ။ ပဲဆီသို့မဟုတ်​ နှမ်းဆီကို ထည့်​နှပ်​ ။မီး​နွေး​နွေးနဲ့. ပတ်​ချာလည်​နှပ်​ ။ပြီး ကျက်​​ရော ဝါးဆန်​​ဆေး​တောင်းထဲ ပိတ်​စိမ်းပါးခံပြီး ခူးထားပါ ။ ပြီး သွားလိုရာ ယူသွားရင်​ ငှက်​​ပျောဖက်​/အင်​ဖက်​နဲ့ထုတ်​။ လိုရာယူ​တော့ ။ ​ရှေးလူကြီးနည်း​တွေ​ပေါ့​နော်​ ။
၇။မြင်းအသဲကို သံပုရာရည်​ နဲ့စိမ်​ ။အလိပ်​ဖြစ်​​အောင်​ ​သေး​သေး​လေး​တွေလုပ်​ ။ အ​ခြောက်​လှန်း။ပ​ယောဂ. ရှိသည်​ဆိုကာ ​သွေး​ဆေးနဲ့​ရောတိုက်​ ။ ဝမ်းထဲ​ရောက်​ သွား​တော့ အကြီးကြီးပြန်​ဖြစ်​လာ​ရော​လေ ။ အန်​​ဆေးတိုက်​​ရော ။ အသားစိုင်​အသားခဲ​တွေအန်​ပါ​လေ​ရော​လေ ။ ဒီနည်းနဲ့ အထက်​လမ်းလိုလို ​အောက်​လမ်းလိုလို ​ဆေးပ​ယောဂလိုလို ပညာမဲ့ အသိမဲ့တဲ့လူ​တွေဆီက​ငွေလိမ်​စား​နေကြတဲ့ အကျင့်​ဆိုး​တွေပါ။
အရှင်ဇာဂရ ( မနောမြေ )